घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू काल्विन फिलिप्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो काल्विन फिलिप्स जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार तथ्यहरू, प्रेमिका / पत्नी हुनु, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली, र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरलतामा, हामी तपाईंलाई काल्विन फिलिप्स लाइफ स्टोरीको पूर्ण विघटनको साथ प्रस्तुत गर्दछौं, प्रारम्भिक दिनदेखि जब उहाँ प्रख्यात भए। उनको बायो को संक्षिप्त चित्र सारांश हेर्नुहोस्।
हो, धेरै फुटबल प्रेमीहरूले उसको समान खेल शैली स्वीकार्दछन् andrea Pirlo, जसले उसलाई उपनाम कमायो; योर्कशायर पिरलो। जे होस्, केवल केहि फ्यानहरूलाई काल्विन फिलिप्स बायोग्राफीको बारेमा थाहा छ, जुन धेरै रोचक छ। ढिलाइ नगरी, सुरु गरौं।
काल्विन फिलिप्स बाल्यकाल कहानी:
सुरू गर्दै, काल्विन मार्क फिलिप्स डिसेम्बर १51995 of को डिसेम्बर the तारिखमा उनको आइरिश आमा लिन्डसे र जमैकन बुबाको जन्म इ Le्ल्यान्डको लीड्समा भएको थियो। फुटबलर एक त्रिपक्षीय जन्म भएको थियो तर उहाँहरूको एक बहिनी हराए जब तिनीहरू अझै थोरै थिए।
फिलिप्सका अरु दुई साना भाई बहिनीहरू छन् जसको बारेमा हामी उनको जीवनीको उत्तरार्धमा अझ बढी कुरा गर्ने छौं। हेर, काल्भिन फिलिप्सका बाबुआमामा जन्मेका तीन-तीन-तिमीले उसलाई चित्रण गर्न सक्छौ?
के तपाईंलाई थाहा छ? ... फिलिप्सको बाल्यकाल उनकी आमाको वरिपरि घुम्न थाल्यो, जसले उनको र आफ्ना भाई-बहिनीहरूलाई एक्लो आमा वा बुबाको रूपमा हेरचाह गर्नुभयो। त्यतिखेर, उनको आमाले पूरा गर्न कडा स .्घर्ष गर्यो, आफ्ना बच्चाहरूलाई उनीले सक्दो उत्तम दिए।
अज्ञात कारणहरूको लागि, फिलिप्सको बाल्यकाल उसको बुवाबाट मुक्त थियो। यद्यपि, उनकी आमाले पितृत्वको जिम्मेवारी लिनुभयो र राम्रो भूमिका खेल्नुभयो। आफ्नो प्रारम्भिक जीवनको बारेमा सोच्दै, मिडफिल्डर अक्सर उनीहरूको एक्लो हातले हुर्काउने साहसको लागि आमाको प्रशंसा गर्दछन्।
काल्विन फिलिप्स परिवार पृष्ठभूमि:
फिलिप्सको पालनपोषणलाई आकार दिने एउटा चाखलाग्दो कुरा प्रेम हो। जवान केटाले आफ्नो आमा र हजुरबा हजुरआमासँग धेरै धेरै राम्रा क्षणहरू बिताएको सम्झना गर्छन्। तल चित्रण गरिएको खुशी फिलिप्सले उसकी आमासँगै बिताएको अपरिवर्तनीय पलको फोटो हो।
तपाईले देख्नुभयो कि, आफ्नो घर भर्ने सन्तुष्टि फिलिप्सको लागि धनी परिवारको रूपमा आफ्नो परिवारलाई विचार गर्न कम गाह्रो भयो। यद्यपि जवान केटा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्।
काल्विन फिलिप्स परिवार मूल:
बक्स-टु-बक्स फुटबलरको पुर्ख्यौली एक भन्दा बढी जातीय सँग जोडिएको छ। यसैले, काल्भिन फिलिप्सको परिवार दुबै आयरिश र जमैकाली जरा हो। उनले आफ्नो बुवासँग समय बिताउन नसक्ने भएकाले आफ्नो पैतृक पारिवारिक उत्पत्ति (जमैका) को विशेषता प्रदर्शन गर्दैनन्।
काल्विन फिलिप्स फुटबल कथा:
एउटा सानो बच्चाको रूपमा, फिलिप्सको जहिले पनि फुटबल खेलिरहेकोमा उसको मन स्थिर थियो। उसलाई खेल यति आकर्षक लाग्यो कि उसले सोच्न सक्ने सबै कुरा उसको सानो भाइसँग खेल्नु हो। त्यस पछि, उनका हजुरबुबा, सधैं तलका युवा खिलाडीहरूसँग फुटबल खेलमा अन्य बच्चाहरूसँग खेल्दा उनीहरूलाई निगरानी राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन्।
अ boy्ग्रेजी केटा ठूलो भएपछि, त्यसरी नै सही क्यारियर मार्ग छनौट गर्न उनलाई मा दबाब पनि गरे। एक पटक, फिलिप्सका शिक्षकले उनलाई फुटबल छोड्न र आफ्नो शिक्षामा ध्यान दिन भने। यद्यपि, फुटबलप्रति उसको प्रेमले उसलाई आफ्नो शिक्षकको सल्लाहलाई स्वीकार्न असम्भव बनायो। लामो कथा छोटो काट्न, उसले आफ्नो निर्णयमा पछुताएन।
क्याल्विन फिलिप्स क्यारियर फुटबलमा प्रारम्भिक जीवन:
फिलिप्सले अरू कुनै चीज भन्दा फुटबलमा बढी चासो देखाएको देखेर, उहाँकी आमाले २०० 2003 मा उनलाई स्थानीय क्लब (वोर्टली) मा भर्ना गर्नुभयो। त्यसबेला यो जवान केटो केवल आठ बर्षको मात्र थियो जब ऊ वोर्लेमा सामेल भयो र उसले आफ्नो प्रतिभाको पालनपोषण गर्नेछ। अर्को सात बर्ष क्लबको साथ।
सन् २०१० को युवा फिलिप्सको लागि ठूलो आशिषको साथ आयो, जसले १ tender वर्षको टेन्डर उमेरमा लीड्स युनाइटेडको एकेडेमीमा सम्मिलित भए। फिलिप्सले भाग्यले भाग्य पाएर लीड्स एकेडेमीमा स्वीकार गरेको तथ्यलाई तपाईं विश्वास गर्नुहुने छैन। तल उनले कसरी आफ्नो लीड्स क्यारियरको उत्पत्तिलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्दछ।
"म उनीहरूको घर टूर्नामेन्टमा खेल्न गएको थिएँ। जहाँसम्म, उनीहरू खेलाडीहरू थिएनन्, त्यसैले म तिनीहरूको लागि खेलें।
म सुन्नी स्वेनी द्वारा स्कुटेटेड भयो र सिटी बाईजको नेतृत्व गर्न। उसले मलाई पछ्यायो र हेरे र मलाई छ वटा साताको परीक्षणमा भयो। यो सबै यहाँबाट आएको थियो। "
काल्विन फिलिप्स जीवनी- प्रख्यात कथाको मार्ग:
चार वर्षको प्रशिक्षण र कडा परिश्रम लिडको एकेडेमीमा फिलिप्सले उनको जन्मजात फुटबलको शक्ति खोल्दा देखे। २०१ 2014 मा, फिलिप्सले क्लबको साथ पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बिन्दुको लागि प्रख्यात खेलाडीहरूको श्रेणीमा काम गरे।
फिलिप्सको पेसागत पेसाको पहिलो वर्ष धेरै अप्रत्याशित उपहारको साथ आयो। पहिले, फिलिप्सलाई लीड्स अ -१ 18 र विकास टीमको कप्तान बनाइयो। दोस्रो, उनी २०१ club एफए कप तेस्रो राउन्डमा सुन्दरल्याण्डको सामना गर्न यात्रा गर्दा उनको क्लबको वरिष्ठ टोलीमा सहभागी हुन चयन गरिएको थियो। जे होस्, त्यो खेल मा एक अप्रयुक्त विकल्प को रूप मा समाप्त भयो।
काल्विन फिलिप्स बायो - सफलता कहानी:
बस युनाइटेड को जस्तै ब्रान्डन विलियम्स, फिलीप्सले आफ्नो क्लब आरक्षित टीमको कप्तानको रूपमा कार्य गर्दा उत्कृष्ट फुटबल प्रदर्शन प्रदर्शन गर्‍यो। अप्रिल २०१ 2015 मा, फिलीप्समा ख्यातीका ढोकाले संकेत गर्‍यो किनकि उनले लिवर युनाइटेडका लागि वोल्वरहैम्प्टन वान्डरर्स बिरूद्ध -4--3 ले पराजय गर्दै आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गरेका थिए।
यो बायो लेख्ने समयमा छिटो अगाडी, फिलिप्सले लीड्स युनाइटेडलाई २०१२-२० ईएफएल च्याम्पियनशिप भित्र पस्न मद्दत गर्यो मार्सेलो बाइल्सा। तसर्थ, उनको क्लब २०teen२-२१ अंग्रेजी प्रिमियर लिगमा सोह्र वर्षमा पहिलो पटक खेल्न प्रमोट गरियो।
के तपाईंलाई थाहा छ कि काल्भिन फिलिप्सले २०१ transfer ट्रान्सफर विन्डोमा २ million मिलियन डलरको एउटा सम्झौता सम्झौता अस्वीकार गरे? उनले टोलीसँग नयाँ years बर्षको करारमा हस्ताक्षर गरे पनि उनले लीड्स युनाइटेडप्रति वफादारीको अविश्वसनीय भाव देखाए। थप रूपमा, गेरैथ साउथेट अगस्त २०२० को २th औं दिनमा उनलाई इ England्ल्यान्ड कल-अपका साथ आशीर्वाद दिए।
आफू जाँदै गरेको कुराको आधारमा, कल्भिन, पक्कै पनि बीचमा स्थान पाउने सम्भावना छ सबै समयको शीर्ष दश सर्वश्रेष्ठ लिड्स युनाइटेड प्लेयर। बाँकी, हामी भन्छौं, अब ईतिहास हो।
काल्विन फिलिप्स पत्नी र बच्चा:
धेरै राम्रो महिलाले यति धेरै प्रेमको साथ आफ्नो जीवन कहानी लाई ग्रहण गरेका छन्। उनकी आमा र बहिनीहरू बाहेक, फिलिप्सको एक अति नै प्रेमिका पनि छ जसलाई उनी यति धेरै प्रेम गर्छिन्। धेरै अवसरहरूमा, अंग्रेजले आफ्नो मेक-अप कलाकार प्रेमिका, एश्लेघ बेहानसँग आफ्नो तस्वीर साझा गर्न इन्स्टाग्राममा लीभेर।
यद्यपि प्रेम-चराहरू विवाहित नभए पनि, तिनीहरू केहि बर्षदेखि सँगै बसेका छन्। प्रीमियर लिगमा लीड्स युनाइटेडको पदोन्नती पछि, यो फिलिप्स र एश्लेह बेहानले चाँडै विवाह गर्ने अफवाह फैलियो। इमानदारीपूर्वक, हामी सबै विवाहको फस्टाउनको लागि उनीहरूको प्रेम कहानीको लागि जरा गाडिरहेका छौं।
हामी यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैनौं कि मिडफिल्डर हंसमुख र शान्तपूर्वक जीवन्त देखिन्छ। जे होस्, लीड्स खेलाडी कहिलेकाँही यो हल्ला हल्ला संसारबाट टाढा भर्खरको उपलब्धिहरू र जीवनमा आइपर्ने असफलताहरूको बारेमा सोच्नको लागि। उसले चित्रमा पानीमा गहिरो नजर राख्दा उसको दिमागमा के हुन सक्छ?
फेरि, अ football्ग्रेजी फुटबल खेलाडी स्वाभाविक रूपमा साना बच्चाहरूसँग समय बिताउन आकर्षित हुन्छन्। ब्राजिलियन स्टार जस्तै, एलेक्स बताउँछफिलिप्सले बिरामी बच्चाहरूलाई पूर्ण स्वास्थ्य पुनः प्राप्त गर्नमा पनि आफ्नो चासो व्यक्त गर्दछ। त्यसकारण उनीहरूले ज्यान जोगाउने धेरै बच्चाहरूलाई खुशी पार्न उनले धेरै अस्पताल भ्रमण गरे।
काल्विन फिलिप्स जीवनशैली:
यस्तो संसारमा बस्ने जहाँ धेरै फुटबल खेलाडीहरू (जस्तै) एडी नाइकेयाहिया र मेसन होलगेट) प्राय: तिनीहरूको कडा कमाई सम्पत्तिहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्, फिलिप्सले अन्यथा गर्ने निर्णय गरेको छ।
लीड्स खेलाडीले आफ्नो विदेशी कार र विलासी घरहरूको प्रदर्शन गर्दैन किनभने उनी मिडियाबाट धेरै ध्यान चाहँदैनन्। जे होस्, फिलिप्स जून २०२० मा लीड्स युनाइटेडको प्रशिक्षण मैदानमा मर्सिडीज बेन्ज जी-वैगन चलाउँदै थिए।
के तपाईंलाई थाहा छ योर्कशायर पिरलो (उसको उपनाम) लीड्स युनाइटेडका शीर्ष आर्जनकर्ताहरू मध्ये एक हो? यो जीवनी लेख्दा फिलिपले लगभग १.£ मिलियन डलरको वार्षिक तलब कमाउँछ। मोरेसो, उसको क्लबले प्रिमियर लिगमा सफलता रेकर्ड गर्दछ भने उसको आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ।
काल्विन फिलिप्स पारिवारिक जीवन:
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नमान्नुहोस्, उसको घरपरिवार उसले पाएको ठूलो उपहार हो। सत्य यो हो कि लीड्स प्लेयरले आफ्नो घर बनाउने प्रत्येकलाई महत्त्व दिन्छ। फिलिप्सको परिवार जहाँ उसको मुटु छ। ढिलाइ नगरी हामी तपाईंलाई अझ उत्तम घरको बारेमा बताउँछौं।
काल्विन फिलिप्स फादरको बारेमा:
हामी यो कुरालाई विवाद गर्न सक्दैनौं कि बुबाको भूमिका परिवारको प्रदायक हो। दुर्भाग्यवश, केहि घर परिवारले त्यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त गर्दैनन्, किनकि तिनीहरूले सायद शुरुमा चरणमा आफ्ना बुवालाई गुमाउन सक्छन् वा पारिवारिक विभाजनको अनुभव गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, काल्भिन फिलिप्सको घर उनकी आमा र हजुरबा हजुरआमाको प्रयासमा निर्माण गरिएको थियो। उसको जमैका बुबा सधैं सेटअपबाटै उनको जीवनीको अभिन्न हिस्सा हुन सकेका छैनन्। जहाँसम्म, फिलिप्स लाइफ स्टोरी एक पिताबाट वंचित धेरै परिवारहरूको लागि मान्य प्रमाण हो कि उनीहरू आफ्नो कमिहरूको साथ पनि सफलताको एक ठूलो उचाइ प्राप्त गर्न सक्दछन्।
काल्विन फिलिप्स आमाको बारेमा:
आजसम्म, उनको जीवनमा सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तित्व उहाँको आमा, लिन्डसे बाहेक अरू कुनै छैन। धेरै अवसरहरूमा, लीड्स युनाइटेडका खेलाडीले आफ्नी आमाको एक्लो हातले र आफ्ना भाइबहिनीहरू हुर्काएकोमा प्रशंसा गर्न विभिन्न अवसरहरू कब्जा गरे। यहाँ उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा उनकी आमाको लागि के लेखेका थिए;
“एक्लो हातले आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाह गर्न कडा मेहनत गर्ने महिलालाई कहिल्यै भेटिएन! दुबै काम गर्ने आमा पाउँदा तपाईंलाई बुबाको आवश्यकता पर्दैन! ”
अवश्य पनि, फिलिप्सकी आमा एकमात्र महिला होइनन् जसले आफ्ना बच्चाहरूलाई एक्लै हुर्काउने उत्कृष्ट काम गरेका छन्। यसकारण, हामी त्यहाँ सबै एकल आमाहरूलाई ठूलो चिल्ला-बाहिर भन्छौं। बलियो रहनुहोस् किनकि तपाईं निश्चित रूपमा टनेलको अन्तमा प्रकाश पाउनुहुनेछ, जस्तै काल्भिन फिलिप्सकी आमा।
काल्विन फिलिप्स भाई बहिनीहरूको बारेमा:
जब तपाईंसँग भाइबहिनीहरूको सही सेट हुन्छन् तब जीवन अझ रमाइलो र पूरा हुन्छ। हामीले अघि नै उल्लेख गरेझैं फिलिप्स एक ट्रिपलेट (उनको र दुई बहिनीहरू) को रूपमा जन्म भएको थियो। यद्यपि उनले एक बहिनी (लेक्रियाशा फिलिप्स) लाई न्यानो उमेरमा मृत्युको चिसो हातमा गुमाए।
तसर्थ, फिलिप्सको जुम्ल्याहा बहिनी, साथ साथै कान्छो भाइ (टेरेल) र बच्चा बहिनी छ। यो मनमोहक छ कि फिलिप्स र उसको बच्चा भाई, टेरेलले आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूमा धेरै घण्टासम्म फुटबल खेलेका थिए। आफ्ना सम्झनाहरू सुनाउँदा फिलिप्सले भने;
“मलाई मेरो भाईको साथ पहिलो लीड्स शर्ट लिने सम्झना छ। जब हामी मौका पाउँछौं हामी बाहिर फुटबल खेल्थ्यौं, बिहान १० देखि साँझ छ बजेसम्म जब मेरी आमाले हामीलाई चिया खान थाल्नुभयो। ”
काल्विन फिलिप्स आफन्तहरूका बारे:
उनकी आमा बाहेक, फिलिप्स हजुरबुबा र हजुरआमा (तल चित्रमा) पनि उनको पालनपोषणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, फिलिप्सका हजुरबा जिमी उसको फुटबलमा नाम कमाउन अघि नै उनका नम्बर एक प्रशंसक थिए।
दुःखको कुरा, जिम्मी आफ्नो नातिनाको पेशेवर फुटबल प्रदर्शनको रमाइलो लिन बाँचिएन। कम म बिर्सन्छु, फिलिप्सको हजुरआमा उनी र उनको आमाको लागि प्रोत्साहनको स्रोत भएका छन् किनकि उनीहरू अझ राम्रो जीवनको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।
काल्विन फिलिप्स अनटोल्ड तथ्यहरू:
आफ्नो जीवन कथा लपेट्न, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवनीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रति महिना £ 130,200
प्रति हप्ता £ 30,000
प्रति दिन £ 4,286
प्रति घण्टा £ 179
प्रति मिनेट £ 2.98
हामीले घडीमा टिकिको रूपमा काल्भिन फिलिप्सको तलबको रणनीतिक विश्लेषण राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनुभए पछि अंग्रेजले कति कमाए भन्ने कुरा आफैले पत्ता लगाउनुहोस्।
यो के हो कलभिन फिलिप्स लीड्ससँग कमाई गर्दै छन् किनकी तपाईंले उनको बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # १: काल्भिन फिलिप्स ट्याटूहरू:
लीड्स युनाइटेड खेलाडीले साइकि theको संसारलाई मन पराउछ। मनपर्‍यो एलेक्स बताउँछ, फिलिप्सले आफ्नो बाँया हातमा मुट्ठीभर ट्याटूहरू लगाए जबकि उनले दाहिने कलाईमा कडा साचो हाले। यद्यपि उसले आफ्नो ट्याटुको अर्थ खुलाउन सकेको छैन, धेरै फ्यानहरूले ग्लैमरस रूपमा प्रदर्शित कलालाई मन पराउँछन्।
तथ्य # १: काल्विन फिलिप्स घरपालुवा जनावरहरू:
यस्तो देखिन्छ कि धेरै अंग्रेजी फुटबलरहरू कुकुरहरूप्रति गहिरो आकर्षण छन्। समान शिरामा, फिलिप्ससँग सानो कुकुर छ जुन उसले धेरै माया गर्छ। हेर्नुहोस् कसरी ऊ आरामको साथ आफ्नो प्यारो सानो कुकुर संग सीट।
तथ्य # १: कालभिन फिलिप्स धर्म:
काल्भिन फिलिप्स एक मसीही हुन् जसले उच्च आदरमा उनको विश्वास राख्छन्। समय समयमा हामी सबैले उहाँकी प्रेमिका र परिवारसँग क्रिष्टसको उत्सव येशू ख्रीष्टमा विश्वासको संकेतको रूपमा देखेको देख्यौं। क्रिसमस मनाउने मनोभावमा, फिलिप्सले शीतकालीन वन्डरल्याण्डमा आफ्ना साथीहरूसँग रमाइलो गर्न केहि समय लिए। के तपाईं उसलाई तलको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ?
तथ्य # १: फिफा रेटिंग:
यद्यपि फिलिप्सले आफ्नो क्यारियरको धेरैजसो समय इएफएलमा बिताए पनि फिफाले उनलाई एक शक्तिशाली खेलाडी ठान्छन्। वास्तवमा फिलिप्ससँग 82२ को सम्भावित रेटिंग छ, जसको मतलब त्यो हो कि उहाँसँग अझ धेरै फुटबल छ आफ्नो औंलाहरुमा। तल उसको तथ्या .्क हेर्नुहोस् र आफैले आफै निर्णय गर्नुहोस् कि उसले पिचमा कसरी प्रदर्शन गर्न सक्छ।
पुरा नाम: काल्विन मार्क फिलिप्स
निक नाम: योर्कशायर पिरलो
जन्म मिति: 5th डिसेम्बर 1995
जन्मस्थान: लीड्स, इ England्ल्यान्ड
Siblings: दुई बहिनीहरू र एक भाइ
प्रेमिका / पति / पत्नी: अशलेग बेहन
वार्षिक वेतन: पाउन्ड 1.5 मिलियन
बजार मूल्य: पाउन्ड 10.9 मिलियन
उचाइ: १.1.78१ मीटर (मीटरमा) र ′ ′ ११ ″ (खुट्टामा)
काल्भिन फिलिप्स लाइफ स्टोरीले निरुत्साहको अवरोधहरूले सधैं हाम्रो क्यारियर मार्गमा सामना गर्ने भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का भन्दा परको छ। यद्यपि, त्यस्ता चुनौतिहरू पार गर्नका लागि हामी अन्यमा हाम्रो विश्वासहरूका बारे निश्चित हुनुपर्छ। निस्सन्देह, उहाँ पनि एक हुनुहुनेछ लीड्स संयुक्तको सबै-समयको सबैभन्दा ठूलो इलेवन.
यसका अतिरिक्त, सफल भविष्यको लागि हाम्रो यात्रा कत्ति गाह्रो हुन सक्छ, हामी सम्झौं कि हामीले त्यो एक व्यक्ति पाएका छौं जसले सधैं हामीलाई समर्थन गर्दछ। यो हाम्रो आमा बुबा, भाई बहिनी, साथी, वा आफन्त हुन; त्यहाँ निस्सन्देह कोही होला जसले हामीलाई हेर्छ। काल्भिन फिलिप्स आमाले त्यो गर्नुभयो जब उनका बुवा आफ्नो जीवनमा अनुपस्थित थिए।
हाम्रो काल्भिन फिलिप्स लाइफ स्टोरी र जीवनी पढ्नको लागि धन्यबाद। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँले केहि फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो लेखसँग ठिक लाग्दैन। अन्यथा, तपाईले केल्भिन फिलिप्स फुटबल अभियानको बारेमा सोच्नुहुन्छ हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्।